Ao Pakistan, takian’ny diabe Azadi ny hifaranan’ny fitondran’ny PM Khan · Global Voices teny Malagasy
Ny politikan'ny 'dharna' ao Pakistan
Voadika ny 14 Novambra 2019 7:21 GMT
Kilaometatra vitsivitsy monja miala ny Lapan'ny Praiminisitra Pakistaney ao an-drenivohitra Islamabad, nanomana ‘dharna’ na hetsi-panoherana sit-in tsy mampiasa herisetra ny lehiben'ny Jamiat Ulema-i-Islam (Fazal) (JUI-F) Maulana Fazl ur Rehman sy ireo mpikambana mpanohitra sasantsasany miaraka amin'ny mpanohana an'arivony tamin'ny 1 Novambra 2019 taorian'ny diabe efatra andro nankao an-tanandehibe.
Ity ‘Diabe Azadi‘, na ‘diaben'ny fahafahana’ ity, dia hetsi-panoherana mitaky ny fialàn'ny praiminisitra Imran Khan sy ny fanafoanana ny antenimiera. Araka ny mpanao fihetsiketsehana, tsy mangarahara ny fifidianana tamin'ny taona 2018 ary ny ao amin'ny fitondram-panjakana no ao ambadiky ny ‘fifantenana’ ny governemanta. Na dia efa nisy intelo aza ny dinika nifanaovan'ny Governemanta sy ny mpikambana ao amin'ny JUI-F Shura, dia mbola tsy ahita-mangirana ny toe-draharaha amin'izao fotoana anaovana ny tatitra izao.
Antoko mampifangaro ny politika ankavanana sy ny fivavahana sonita Deobandi ao Pakistan ny JUI-F. Andro vitsy monja mialoha ny hanombohan'ny hetsi-panoherana, noraràn'ny governemanta federaly ny Ansar-ul-Islam, izay lazaina ho elatra mpitolona (mitam-piadiana?) ao amin'ny JUI(F). Nanararaotra ihany koa ny Ligy Miozolomana Pakistan (Nawaz), ny Antokom-Bahoaka Pakistan (PPP) ary ny sasantsasany amin'ireo tsy miala mihitsy amin'ny mpanohitra ara-politika hafa maro dia maro mba handray anjara amin'ny diabe ho fanoherana ny governemanta.
Ny mampihomehy dia efa nitarika Diabe Azadi sy sit-in naharitra 126 andro hanaovana izay hanesorana ny praiminisitra Nawaz Sharif tamin'izany fotoana izany ihany koa i Imran Khan, praiminisitra amin'izao fotoana izao.
Omen'ny mpikarakara sakafo sy fisotro ny mpanao fihetsiketsehana mandritra ny sit-in, manolotra vavaka, manonona andinin-tsoratra Korany, ary manao karazan-dalao ry zareo hanalana andro. Nahitana saina Pakistaney vitsivitsy tao amin'ny diabe ary nahitana ny sainan'i Emirà Islamikan'i Afghanistan, i.e., izany hoe ny Taliban Afghan ihany koa tao amin'ny vahoaka tao.
Indro i SajidUllah, mpanohana ny Emirà Islamika ao amin'ny #JUIF Jalsa -hita betsaka ao amin'ny dharma ny sainan'ny Emirà Islamika izany hoe ny Taliban Afghan.
Tao amin'ny kabariny i Maulana Fazlur Rehman nitsikera ny governemanta sy ny andrim-panjakana (mandòna any amin'ny tafika):
Ho valin'izany kabary izany, namoaka fanambaràna ny tale jeneralin'ny interservisin'ny Fifandraisana amin'ny vahoaka (ISPR) ny Mazaoro Jeneraly Asif Ghafoor:
Araka ny fanadihadiana nataon'ilay Pakistaney-Amerikana mpanao matoandahatsoratra Mohammad Taqi, miady ny adiny ho amin'ny fiangànana ara-politika i Maulana Fazlur Rehman amin'ity Diabe Azadi ity.
Manao ny ezaka rehetra ny lehiben'ny JUI-F Chief mba hitazonana hatrany ny mpihaino azy hirotsaka ao amin'ny diabe Azadi, vitany hatramin'ny mandroàra fankahalàna an'i Israely, India, ary ihany koa ny vondrom-piarahamonina Qadiani na ny Miozolomana Ahmadiyya.
Melohin'ny mpisera Twitter ihany koa ny filohan'ny Pakistan Peoples Party (PPP) Bilawal Bhutto Zardari ao amin'ny fanoherana noho ny fijoroana eo ankilan'ny lehiben'ny JUI-F teo an-tsehatra raha niteny manohitra ny vondrom-piarahamonina miozolomana vitsy an'isa Ahmadiyya izy. Voatsikera ho nangina nandritra ny diabe ny PPP, izay fantatra amin'ny ho ankilan'ny vondrom-piarahamonina vitsy an'isa sy miaraka amin'i Asia Bibi amin'ny raharaham-pitenenan-dratsy an'Andriamanitra anenjehana io vehivavy voatonona farany io.
Nandritra ny Diabe Azadi, nisy ihany koa ny fahatapahana aterineto tsindraindray. Araka ny Digital Rights Monitor, niato ny servisin-data finday tamin'ny farira sasany tao Islamabad, Punjab ary Khyber Pakhtunkhwa mba hamerana ny famoahana mivantana ny ‘Diabe Azadi’.
Nisedra fanoherana ihany koa ny vehivavy mpanora-gazety vitsivitsy rehefa niezaka ny hanao diabe ry zareo.
Talohan'izany ny lehiben'ny JUI-F Maulana Fazlur Rehman nampahafantatra ny Ligy Miozolomana Pakistan-Nawaz (PML-N) amin'ny tsy fandraisan'ny vehivavy anjara amin'ny sit-in ho avy ao Islamabad satria tsy Islamika izany amin'ny fomba fisainandry zareo hoe vehivavy handray anjara amin'ny zavatra toy izany.